Izvi zvakavanzika Gwaro kwave akaanyora kushumira nani vaya hanya zvavo sei 'Pachedu Identificável Information’ (PII) riri kushandiswa paIndaneti. PII, sezvinorondedzerwa US voga mutemo uye mashoko nokuchengeteka, mashoko inogona kushandiswa iri yayo kana nevamwe mashoko kuziva, udza mashoko, kana kuwana chete munhu, kana kuziva munhu ari akapoteredza. Tapota verenga yedu zvakavanzika inozowana nokungwarira kuwana kunzwisisa kwakajeka sei isu unganidza, shandisa, kudzivirira kana kubata kwenyu Pachedu Identificável Information maererano Website yedu.
Chii pachedu mashoko chatinofanira kuunganidzira kuvanhu kuti ashanyire Blog yedu, Website kana Anwendung?
Apo tinoita unganidza mashoko?
Isu unganidza ruzivo kubva kwamuri kana iwe kana kupinda ruzivo pamusoro yedu yepaIndaneti.
atipe inofambiswa zvinhu zvedu kana mabasa
Sei isu kushandisa ruzivo rwako?
Tinogona kushandisa mashoko isu inotorwa kubva kwauri kana iwe nyoresa, kuita kutenga, kusaina nokuti mugwaronhau kwedu, vanobvuma pokuongorora kana yokutengesa kutaurirana, Surf ari Website, kana kushandisa nevamwe nzvimbo zvinhu nenzira dzinotevera:
Sei isu kuchengetedza ruzivo rwako?
Website dzedu tarisa nguva dzose nokuda makomba kuchengeteka uye kuriziva maburi kuti kushanya kwenyu yedu yepaIndaneti sezvo yakachengeteka sezvinobvira.
Tinoshandisa nguva dzose Malware pakuvheneka.
Hatidi kushandisa SSL chitupa
• Isu chete kupa nyaya uye ruzivo. Hatina kumbobvira kukumbira pachako kana muchivande mashoko akafanana mazita, e kero, kana kadhi nhamba.
Ita tinoshandisa 'makeke'?
Ehe. Cookies zvidiki mafaira kuti nzvimbo kana nebasa rayo Provider anotamisa kuti zvakaoma ngarurege kombiyuta yako kuburikidza kwenyu Web mubrowser (kana ukabvumira) kuti inoita nzvimbo kana basa Provider kuti hurongwa kuziva browser uye andobata uye yeuka vamwe mashoko. Semuyenzaniso, tinoshandisa Cookies kutibatsira kuyeuka uye dzinoona zvinhu munyika yenyu yekutengera. Vari inoshandiswawo kutibatsira kunzwisisa zvaunofarira yakavakirwa yapfuura kana ano nzvimbo basa, izvo zvinoita kuti tikwanise kukupa kuvandudzika mabasa. Tinoshandisawo Cookies kutibatsira vainyora uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. mashoko pamusoro yepaIndaneti motokari uye nzvimbo kudyidzana tinogona kuitira kuti kupa nani panzvimbo zvakaitika zvokurimisa mune ramangwana.
Tinoshandisa macookie ashande kuti:
• Nzwisisa uponese rokushandisa zvatinofarira nezveramangwana kushanyirwa.
• Ramba uchiongorora okushambadza.
• Batanidza uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. mashoko pamusoro yepaIndaneti motokari uye nzvimbo aiita kuti ape nani nzvimbo zvakaitika zvokurimisa mune ramangwana. Tinogona kushandisa aivimbwa chechitatu-vebato mabasa chamber mashoko aya nokuda kwedu.
Unogona kusarudza kuti kombiyuta yako vanonyevera uve kudzayi ari akatuma nguva imwe neimwe, kana kuti unogona kusarudza kuti kudzima makeke zvose. Iwe ita ichi kuburikidza yenyu mubrowser Kurongwa. Sezvo mubrowser chinguva akasiyana, tarisa Browser wako Help Menu kudzidza nzira yakarurama yokugadziridza makeke ako.
Kana uchidzora makeke kure, zvimwe zvichabviswa akaremara. harizovi kuchinja zvakaitika rokushandisa kuti yako nzvimbo ruzivo yakawanda uye varege kuitike.
zvisinei, uchange kukwanisa kuisa mirairo .
Hatidi tengesa, tengeserana, kana zvimwewo kutamira kunze kumapati ako pachako Identificável Information kutoti tiri kupa vanoshandisa pamwe kufanoronga chiziviso. Izvi hazvirevi zvinosanganisira Website nemitambo vadyidzani uye mamwe mapato vanobatsira nesu kushanda Website yedu, achiita bhizimisi redu, kana tichishumira vanozvishandisa dzedu, saka nguva mapato avo vanobvuma kuchengeta mashoko aya zvakavanzika. Tinogonawo kusunungura mashoko kana asunungurwe zvakakodzera zvinoenderana mutemo, manikidzira yedu yepaIndaneti mitemo, kana kudzivirira zvedu kana vamwe’ kodzero, pfuma kana vakachengeteka.
zvisinei, non-pachako dzinozivikanwa mushanyi mashoko anogona kupiwa kune mamwe mapato nokuda Marketing, kushambadza, kana zvimwe zvakaita sekurima.
nguva dziri kure, panguva kungwara kwedu, isu zvingasanganisira kana kupa yechitatu-vebato zvinhu kana mabasa website yedu. Ava yechitatu-vebato nzvimbo nevachena uye akazvimirira oga mitemo. saka hatina basa kana liability kuti kugutsikana uye mabasa ava kwakabatana nzvimbo. Kunyange zvakadaro, tinotsvaka kudzivirira kuvimbika kwedu nzvimbo uye ngativagamuchirei chero inofambiswa pamusoro nzvimbo idzi.
kushambadza zvinodiwa Google anogona kupfupikiswa nokuda Advertising Principles yeGoogle. Vari pakaiswa kupa zvakanaka chiitiko vanoshandisa. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl = ts
Tinoshandisa Google AdSense Advertising website yedu.
Google, sezvo yechitatu-party mutengesi, anoshandisa Cookies kushumira achigadzira yedu yepaIndaneti. Kushandisa Google wacho museve Cookie inoita kuti kushumira achigadzira kuti vanoshandisa edu anotsanangura kwaainge kushanyira kwedu paIndaneti uye zvimwe paIndaneti. Users vanogona vasarudze-kubva kushandiswa museve Cookie kushanyirazve Google Ad uye Content Network zvakavanzika itsika.
Tava chinozoiswa zvinotevera:
• Demographics uye Interests Reporting
isu, pamwe yechitatu vebato vapemhi akadai Google kushandisa vomuzana vebato evästeet (dzakadai Google Analytics Cookies) uye chechitatu-vebato evästeet (dzakadai DoubleClick kudzayi) kana zvimwe yechitatu-vebato identifiers pamwe kuronga mashoko panyaya User aiita AD pazvidhindo nezvimwe AD basa mabasa sezvo inesungano Website yedu.
Users anogona kuisa zvatinofarira sei Google advertises kwamuri uchishandisa Google Ad Settings peji. Nerumwe, unogona vasarudze panze nokushanyira Network Advertising Initiative vasarudze Out peji kana achishandisa Google Analytics vasarudze Out Browser wedzera pamusoro.
CalOPPA ndiye wokutanga mamiriro mutemo munyika kuti zvinoda yezvokutengeserana Websites nerubatsiro paIndaneti kuposita munhu asaonekwa inozowana. Mutemo wacho akavanzvenga atambanudza zvakanaka mhiri California kuti zvinoda munhu kana kambani muUnited States (uye conceivably nyika) anoshanda Websites achiunganidza Pachedu Identificável Information kubva kuCalifornia vatengi kuposita munhu yainyatsooneka zvakavanzika inozowana website yayo pokutaura mashoko chaizvo kuitwa anounganidzwa uye vanhu ivavo kana makambani naye iri chavanonzwanana. – Ona zvakawanda panguva: http:://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Maererano CalOPPA, Takabvuma zvinotevera:
Vanokwanisa kushanyira kwedu nzvimbo anonymously.
Kamwe ichi zvakavanzika itsika wakasikwa, tichava kuwedzera kubatana pazviri papeji redu musha kana ave mashoma, nezuva rokutanga kuchikosha peji pashure kupinda Website wedu.
Anogona kushandura mashoko ako pachako:
• By isu emailing
• By kutema muna kuchikwama chenyu
Sei yedu yepaIndaneti kubata Usaparadzanisa Pota anonongedzera?
Tinokudza Usaparadzanisa Pota anonongedzera uye Usaparadzanisa Pota, chirimwa Cookies, kana kushandisa kushambadza apo regai Track (DNT) mubrowser mashandiro ari munzvimbo.
Ko yedu yepaIndaneti kubvumira yechitatu-vebato zvounhu Tracking?
Zviri Zvakakosha kuziva kuti tinobvumira rechitatu-vebato zvounhu Tracking
Cup (Vana Online Privacy Protection Act)
Kana totaura kuunganidzwa mashoko pachavo kubva kuvana pasi pemakore 13 zera, Vana vake Online Privacy Protection Act (Cup) anoisa vabereki kudzora. The Federal Trade Commission, nyika dzakabatana’ Mutengi Protection Agency, enforces ari COPPA Rule, izvo anoperetera panze chii dzaishandisa pakati Websites uye mabasa paIndaneti vanofanira kuitei kuti vadzivirire vana zvakavanzika uye vakachengeteka paIndaneti.
Hatifaniri zvakananga kumusika vana pasi pemakore 13 zera.
Fair Information Miitiro
The Fair Information Miitiro Principles zvinoumba nomuzongoza voga mutemo muUnited States uye pfungwa zvinosanganisira vakaita basa rinokosha kukura mitemo date kudzivirira munyika yose. Kunzwisisa Fair Information Practice Principles uye sei vanofanira chinozoiswa vachishoropodza zvinoenderana siyana toga mitemo zvinodzivirira zvemunhu.
Kuti ave maererano Fair Information Miitiro tichatora zvinotevera wirirana chiito, anofanira date pakakoromoka kuitika:
Tichakurukura wazivisa vanozvishandisa vachishandisa mu-nzvimbo ziviso
• mukati 7 mabhizimisi mazuva
Tinewo dzinobvumirana kuti Individual igadzirise Principle kunoda kuti vanhu vane kodzero pamutemo vatevere enforceable kodzero pamusoro Data vateresi uye processors vanokundikana vanoteerera mutemo. Pfungwa iyi Hakungodi kuti vanhu vane enforceable kodzero pamusoro mashoko vanoshandisa, asi kuti vanhu vane mukana wokuzvidzivirira kumatare kana hurumende masangano kuongorora uye / kana sunga asiri uchiwirirana kubudikidza date processors.
UNOGONA SPAM Act
The anogona-SPAM Act mutemo chinosiyanisa mitemo zvebhizimisi Email, anovamba zvinodiwa zvebhizimisi mashoko, anopa vanogamuchira kodzero na akamira kubvira kutumwa kwavari, uye anoperetera panze chakaoma vairangwa kutyorwa.
Isu unganidza email address kuti:
• Send ruzivo, sei zvokubvunza, uye / kana zvimwe zvikumbiro kana mibvunzo
• Process mirayiro uye kutumira mashoko reserved chokuita mirairo.
• Kukutuma mamwe mashoko chokuita chigadzirwa yako uye / kana basa
• Market dzedu no nyora kana kuramba kutumira na yedu vatengi pashure chepakutanga mutengapwe kwakaitika.
Kuti vave sezvakafanira CANSPAM, Takabvuma zvinotevera:
• Kwete kushandisa zvidzidzo venhema kana kutsausa kana Email neyakare.
• Ziva mashoko sezvo vanoshambadza mune dzimwe anonzwisisa nzira.
• Nyorawo kero yedu mabhizimisi kana paIndaneti muzinda chaiko.
• Monitor yechitatu-party tsambambozha yokutengesa zvekushandisa abvume, kana munhu rinoshandiswa.
• Kudza vanosarudza-panze / Unsubscribe zvikumbiro nokukurumidza.
• Rega vanoshandisa Unsubscribe nokushandisa kubatana pazasi nomumwe Email.
Kana chero nguva zvaungada Unsubscribe kubva kugamuchira na ramangwana, unogona isu paemail panguva
• Kutevedzera mirayiridzo nechepasi neimwe Email.
uye tichaita kukurumidza kubvisa iwe kubva ALL tsamba.
Kana paine chero mibvunzo panyaya iyi zvakavanzika itsika, unogona kutirovera runhare kushandisa ruzivo pazasi.
Khoriva mumugwagwa, 50
Last Edited pamusoro 2016-07-05